जिउँदो शहिद मुकेशको उपचारमा आर्थिक संकट | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← नेपाल भलिवल क्लब कुवेतले आयोजना तथा BEC एक्सचेंज प्रायोजनमा महाबुल्ला कुवेतमा आज आयोजति खुल्ला भलिवल प्रतियोगिताको उपाधि अलघानिम लाई
राष्ट्रपतिका लागि नमूना गाडी तयार, भीख माग्दा कति उठ्यो ? →
जिउँदो शहिद मुकेशको उपचारमा आर्थिक संकट
Posted on 02/12/2018 by कुवेतनेपाल एडमिन | टिप्पणी छोड्नुहोस्
काठमाडौ । जनआन्दोलन २०६२÷०६३ का घाईते अर्थात् सरकारद्धारा घोषित जिउँदो शहिद मुकेश कायस्थलाई ३ दिन अघि नेपाल मेडिसिटी अस्पताल भर्ना गरिएको छ । एकसाता अघि वीर अस्पतालमा शल्यक्रियाअशंभव पछि कायस्थलाई मेडिसिटी भर्ना गरिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुकेशको उपचारका लागि ५ लाख रुपैया उपलब्ध गराउने बचन दिनुभएको थियो । अहिले सम्म उक्त रकम पनि कुनै निकायबाट प्राप्त नभएको परिवारले जनाएको छ । सरकारी अस्पतालमा मुकेशको निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारले निर्णय गरेको भए पनि सरकारी अस्पतालमा उक्त सेवा नपाएकाले प्राइभेट अस्पतालको शरणमा पुगेको मुकेशकी आमा मीरा कायस्थ बताउँनुहुन्छ ।
अर्धचेत अवस्थामा रहेका मुकेशको वीर अस्पतालमा गरिएको पहिलो शल्यक्रियाका क्रममा उनको टाउकोमा राखिएको भिपिसन्ड (टाउकोमा जम्मा भएको पानी पेट हुँदै बाहिर पठाउने पाइप) फेर्न अस्पताल भर्ना गरिएको हो । यस अघि पनि वीर अस्पतालमा मुकेशको टाउँकाको पाइप वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा.गोपाल रमन शर्माको नेतृत्वको टोलीले परिवर्तन गरेको मीराले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ–अहिले पनि एक साता अघि वीर अस्पताल अर्थात ट्रमा सेन्टरमा मुकेशको शल्यक्रियाको तयारी गरि भर्ना गरि सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको अवस्थामा चिकित्सकहरुले शल्यक्रिया रोकियो भने कारण खोलेनन् । मुकेशको हेरचाह र रेखदेखको लागि २ जना नियमित लाग्नुपर्ने हुन्छ । दुबैजना श्रीमान् श्रीमती छोराको स्याहारमा जुटेका छौ, आम्दानीको स्रोत छैन ।
सरकारले बोलेका कुरा पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा छोरालाई जसरी पनि बचाउँनुछ । त्यसैले यतिबेला मेडिसिटीको शरणमा उनै डा.गोपाल रमणको सरणमा पुगेका छौ । आइतबार मुकेशको शल्यक्रिया हुन्छ भनिएको छ ।
आफुसँग पैसा छैन अस्पतालले ४ लाख सम्म लाग्छ भनेको छ । सरकारले सहयोग गर्छु भनेर दिएको बचन पुरा नहुँदा छोराको उपचारमा समस्या आएको मुकेशका बाबु कृष्णमान श्रेष्ठ बताउँनुहुन्छ । नीजि अस्पतालको सरणमा पुगेका छौ पैसा महगो छ । अस्पतालमा सामान्य बेड नपाउँदा थप आर्थिक भार बढेको छ । यतिबेला मुकेशलाई मेडिसिटीको सातौ तल्लाको ७२७ नं को कमन क्याबिनमा विहिवार देखि भर्ना गरिएको छ । आइतबार शल्यक्रियाको मिति तोकिएको छ । सरकारसँग हार गुहार गर्दै छौ, सुनुवाई हुने आशा अझै मरेको छैन ।
मुकेशका बाबु आमाले मेडिसिटीले मानवीयता प्रयोग गरेर मुकेशको उपचारमा सहुलियत गरे मात्र हो नत्र कुनै बाध्यता छैन् भन्नुहुन्छ । हामीले अस्पताल प्रशासनसँग आग्रह गरेका छौ उहाँहरुले ४ लाख लाग्छ भन्नुभएको छ । हाम्रो चाहना भनेको दिमागमा पानी जम्न नदिनका लागि चिकित्सकको सल्लाह अनुसार विगतमा जस्तै पाइप राखेर छोरालाई सहज बनाउने हो । यतिबेला हाम्रो पुकार सुनिदिने निकाय कहाँ होला ?
मुकेश कायस्थ प्रतिष्ठानका कार्यक्रम संयोजक मोहन दुवाल भन्नुहुन्छ–मुकेशको उपचार सरकारले गर्नुपर्ने हो । जिउँदो शहिद मुकेश कायस्थको उपचारको क्रममा हुने आर्थिक समस्यामा सरकारका तर्फबाट र अस्पतालका तर्फबाट पनि सहयोग हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।
लोकतन्त्र र नयाँ संविधानका लागि जनआन्दोलनको क्रममा २०६२ साल चैत्र २७ गते बनेपाको तीन डोबाटोमा प्रहरीको गोली लागि घाईते भएका मुकेश कायस्थ अचेतभै बेडमा सुतेको १३ बर्ष बितिसक्यो । यो अवधिमा जो जो प्रधानमन्त्री बन्नुभयो उहाँहरुले मुकेशको उपचारका लागि निःशुल्क सेवा मात्र हैन छुट्टै नर्स घरमै उपलब्ध गराउने निर्णय पनि नगरेका होइनन् । पन्ध्र बर्षको कलिलो उमेरमै जनआन्दोलनमा होमिएका थिए ।
दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गराउने प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री तथा संयोजक हुनुभएका खिलराज रेग्मीले भनेको यो भनाई यथार्थपरक बन्दै गएको छ । उहाँ संयोजक रहेकै बखत जनआन्दोलनका घाइते तथा जिउँदो शहित मुकेशको घरमै पुग्नुभै उहाँले दिनुभएका यी अभिव्यक्ति अहिले पनि नेताहरुको व्यवहारमा जस्ताको तस्तै छ ।
उहाँले भन्नुभएको थियो–नेपालको राजनीतिक अवस्था र मुकेशको स्वास्थ अवस्था उस्तैउस्तै छ । आन्दोलनको क्रममा सुरक्षाकर्मीले मुकेशलाई जसरी घाइते बनाए अहिले राजनीतिलाई पनि नेताहरुले त्यसैगरि घाइते बनाएका छन् । मुकेशका आमाबाबुले आफ्नो छोरालाई हेरेर जति आशा, भरोसाका साथ विरक्त मान्छन नेताहरुको क्रियाकलापलाई हेरेर आम जनताले पनि त्यस्तै महशुस गर्छन । फरक यत्ति छ मुकेशले आफ्ना आमाबाबुलाई झुक्याउदैनन नेताहरु जनतालाई झुक्काइरहन्छन । चिकित्सकहरु मुकेशको दिमाग बढाउन प्रयास गर्छन, नेताहरु जनताको दिमाग भुट्ने दुष्प्रयास गर्छन ।
पुराना पेजहरु महिना छान्नुहोस् डिसेम्बर 2020 (3) नोभेम्बर 2020 (26) अक्टोबर 2020 (4) सेप्टेम्बर 2020 (30) अगस्ट 2020 (26) जुलाई 2020 (26) जुन 2020 (11) मे 2020 (14) अप्रील 2020 (7) मार्च 2020 (30) फ्रेवुअरी 2020 (50) जनवरी 2020 (55) डिसेम्बर 2019 (69) नोभेम्बर 2019 (49) अक्टोबर 2019 (55) सेप्टेम्बर 2019 (59) अगस्ट 2019 (62) जुलाई 2019 (67) जुन 2019 (73) मे 2019 (46) अप्रील 2019 (14) मार्च 2019 (21) फ्रेवुअरी 2019 (55) जनवरी 2019 (67) डिसेम्बर 2018 (71) नोभेम्बर 2018 (38) अक्टोबर 2018 (28) सेप्टेम्बर 2018 (55) अगस्ट 2018 (52) जुलाई 2018 (63) जुन 2018 (77) मे 2018 (72) अप्रील 2018 (73) मार्च 2018 (58) फ्रेवुअरी 2018 (60) जनवरी 2018 (64) डिसेम्बर 2017 (75) नोभेम्बर 2017 (74) अक्टोबर 2017 (73) सेप्टेम्बर 2017 (71) अगस्ट 2017 (85) जुलाई 2017 (87) जुन 2017 (72) मे 2017 (47) अप्रील 2017 (66) मार्च 2017 (55) फ्रेवुअरी 2017 (53) जनवरी 2017 (54) डिसेम्बर 2016 (43) नोभेम्बर 2016 (81) अक्टोबर 2016 (73) सेप्टेम्बर 2016 (88) अगस्ट 2016 (89) जुलाई 2016 (86) जुन 2016 (77) मे 2016 (83) अप्रील 2016 (88) मार्च 2016 (114) फ्रेवुअरी 2016 (110) जनवरी 2016 (85) डिसेम्बर 2015 (81) नोभेम्बर 2015 (76) अक्टोबर 2015 (94) सेप्टेम्बर 2015 (95) अगस्ट 2015 (97) जुलाई 2015 (93) जुन 2015 (92) मे 2015 (100) अप्रील 2015 (106) मार्च 2015 (99) फ्रेवुअरी 2015 (60) जनवरी 2015 (58) डिसेम्बर 2014 (96) नोभेम्बर 2014 (106) अक्टोबर 2014 (110) सेप्टेम्बर 2014 (103) अगस्ट 2014 (96) जुलाई 2014 (83) जुन 2014 (95) मे 2014 (89) अप्रील 2014 (110) मार्च 2014 (103) फ्रेवुअरी 2014 (96) जनवरी 2014 (109) डिसेम्बर 2013 (100) नोभेम्बर 2013 (90) अक्टोबर 2013 (105) सेप्टेम्बर 2013 (134) अगस्ट 2013 (117) जुलाई 2013 (125) जुन 2013 (110) मे 2013 (121) अप्रील 2013 (130) मार्च 2013 (121) फ्रेवुअरी 2013 (108) जनवरी 2013 (124) डिसेम्बर 2012 (122) नोभेम्बर 2012 (121) अक्टोबर 2012 (119) सेप्टेम्बर 2012 (142) अगस्ट 2012 (159) जुलाई 2012 (161) जुन 2012 (164) मे 2012 (187) अप्रील 2012 (148) मार्च 2012 (177) फ्रेवुअरी 2012 (123) जनवरी 2012 (111) डिसेम्बर 2011 (137) नोभेम्बर 2011 (164) अक्टोबर 2011 (176) सेप्टेम्बर 2011 (174) अगस्ट 2011 (202) जुलाई 2011 (179) जुन 2011 (199) मे 2011 (229) अप्रील 2011 (245) मार्च 2011 (279) फ्रेवुअरी 2011 (250) जनवरी 2011 (252) डिसेम्बर 2010 (183) नोभेम्बर 2010 (138) अक्टोबर 2010 (220) सेप्टेम्बर 2010 (253) अगस्ट 2010 (390) जुलाई 2010 (256) जुन 2010 (210) मे 2010 (220) अप्रील 2010 (166) मार्च 2010 (229) फ्रेवुअरी 2010 (131) जनवरी 2010 (207) डिसेम्बर 2009 (152) नोभेम्बर 2009 (141) अक्टोबर 2009 (103) सेप्टेम्बर 2009 (92) अगस्ट 2009 (157) जुलाई 2009 (130) जुन 2009 (89) मे 2009 (172) अप्रील 2009 (62) मार्च 2009 (50) फ्रेवुअरी 2009 (25) जनवरी 2009 (48) डिसेम्बर 2008 (77) नोभेम्बर 2008 (62) अक्टोबर 2008 (25) सेप्टेम्बर 2008 (21) अगस्ट 2008 (3) जुलाई 2008 (2) जुन 2008 (2)
नेपालसँग समझदारी विकास हुँदैछ : भारतीय विदेशमन्त्री जयंशकर
एकै दिन ३ सयभन्दा बढी अस्पताल शिलान्यास
नाइजेरियामा सशस्‍त्र समूहको भीषण हमलाः ११० किसान मारिए
दाहाललाई ओलीको कडा जवाफ
चीनका रक्षामन्त्री वेई काठमाडौंमा
प्रधानमन्त्री ओलीले भेनेजुयला प्रस्थान गर्दै
जनवरी १२ तारिक तमु ल्होसार तथा चेलिबेटी भोज (माँङी त्हे)सांस्कृतिक रमझम ले रमाईलो हुने ।